'राष्ट्रिय पुस्तक नीति' छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ– शिक्षामन्त्री | Educationpati.com
२०७६ भदौ १५ गते १२:३९मा प्रकाशित
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय पुस्तक नीति छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा लगिने बताएका छन् । कानून र अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृती पाइसकेको खुलासा गर्दै मन्त्री पोखरेलले मस्यौदालाई अन्तिम रुपदिने काम भइरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
बाह्रौं पुस्तकालय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय पुस्तक नीति लागु भएपछि नेपालको पुस्तकालय तथा पुस्तक प्रकाशन र विकासमा नयाँ अध्याय थपिने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारले शिक्षण सिकाइमा पुस्तकालयको प्रयोग गर्नका लागि भन्दै एक विद्यालय एक पुस्तकालयको नीति लिएको भन्दै भन्दै उनले हरेक विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न, सूचना प्रविधियुक्त विद्युतीय पुस्तकालय सञ्चालन गरिने स्पष्ट पारे ।
यो वर्ष २–२ वटा प्रदेशस्तरमा र केन्द्रिय पुस्तकालयका लागि वजेट छुट्याइसकिएकोसमेत मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । एकहजार विद्यालयहरुका लागि पनि ६ लाख ५० हजारका दरले वजेट छुट्याएको उनले जानकारी दिए ।
गतवर्ष सम्ममा ६२ सय विद्यालयहरुमा पुस्तकालयहरु निर्माण भइसकेका उनले स्पष्ट पारे । यो सँगै विद्यालयहरुमा बुक कर्नरका लागि समेत रकम छुट्याइएको उनले जानकारी दिए ।
केशर पुस्तकालयको रेट्रोफिटिङको काम अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ । भूकम्प प्रभावित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि जग्गाको व्यवस्था भइसकेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
आफ्ना पुस्तकहरु दिएर नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने केशर शमशेर र डिल्लीरमण रेग्मीलाई स्मरण गर्दै मन्त्री पोखरेलले पुस्तकालय दिवसको माध्यमबाट पठनसंस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
'पुस्तक प्रतिको रुचि र कविता नलेख्ने भएको भए म मन्त्री नै हुँदैनथे होला'– मन्त्री पोखरेलले भने ।
आफू विदेश जाँदा पनि ति देशका पुस्तकालय हेर्न जाने गरेको समेत उनले स्पष्ट पारे । आफुले कोरियाको पुस्तकालयबाट प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।
७५३ स्थानीय तहमै पुस्तकालय पुर्याइने भन्दै उनले जेलहरुमा पनि पुस्तकालयको विकास गरिने स्पष्ट पारे । एउटा मुलुक कता जान्छ भन्ने कुरा त्यहाँको पुस्तक नीति के छ ? पुस्तकालय सम्बन्धी नीति के छ ? भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो ।
नेपालमा लालमोहर लिखित कानून मध्येको अग्रणी मानिन्छ । पुस्तकालय स्थापना गर्न भनेको कानून भन्दा करिब ३१ व्र्षपछि मात्रै मुलुकी ऐन बनेको देखिन्छ । मन्त्री पोखरेलले भने ।
सोही ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै २०६५ सालदेखि मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम गरी पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
छोटे अवधिमा पुस्तकालय दिवसको माध्यमबाट नेपालमा पठन संस्कृतिको विकास र विस्तारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले पुस्तकालयको आवश्यकता र महत्वलाई बढाएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
सामुदायिक र सार्वजनिक पुस्तकालयहरु यसका संस्थानहरु हुन् भन्दै पोखरेलले पुस्तकालयबाट बिना भेदभाव सबैपेशा, जाती धर्मका व्यक्तिहरुले ज्ञान आर्जन गर्न पाउने बताए । पुस्तकालयलाई जनताका विश्वविद्यालयसमेत भनिने भन्दै उनले सरकारले हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न सामुदायिक पुस्तकालय बनाउने नीति लिएको स्पष्ट पारे ।
नेपालमा पुस्तकालय नीति लागु गर्नका लागि राष्ट्रिय पुस्तक नीति तय गर्न गठित् कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन पुस्तकालय भुमियोजना तथा पुस्तकालय स्वचालिकरणका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेकोसमेत उनले स्पष्ट पारे ।
यसवर्षको पुस्तकालय दिवसको आर्दश वाक्य– ‘पठनसंस्कृतिको पूर्वाधार, पुस्तकालयको विकास र विस्तार’ रहेको छ ।